ရတနာပုံတက္ကသိုလ်'' Job Fair''အခမ်းအနားတက်ရောက်ခြင်း
Dialogue on Food Value Chain in Myanmar အခမ်းအနား ကျင်းပ
MRCCI နှင့် Aesan-Japan Centre တို့ပူးပေါင်း၍
၂၀၁၇ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း Hall ခန်းမ ၌ MRCCI…
အိန္ဒိယ ကောင်စစ်ဝန်ချုပ် Dr.နန္ဒာကူးမားအား နှုတ်ခွန်းဆက် အမှတ်တရ လက်ဆောင်ပစ္စည်း ပေးအပ်
တာဝန်ပြီးဆုံး၍ အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ထွက်ခွါတော့မည့် အိန္ဒိယကောင်စစ်ဝန်ချုပ်
၂၀၁၇ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၈ ရက် တာဝန်ပြီးဆုံး၍ အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ထွက်ခွါတော့မည့် အိန္ဒိယကောင်စစ်ဝန်ချုပ် Dr.နန္ဒာကူးမားအား တွေ့ဆုံကာ နှုတ်ခွန်းဆက် အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်း ပေးအပ်ပွဲကို MRCCI…
လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးလျှင် ကျပ်သိန်း(၁၀၀)စီထောက်ပံ့ငွေပေးအပ်မည့် အစီအစဉ် ဆွေးနွေးပွဲ
MRCCI ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်မင်းပါ ချေးငွေထောက်ပံ့ရေးကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်(၁၀)ဦး၊ KBZဘဏ်မှ
၂-၂-၂၀၁၇ ရက် ၁၅း၀၀ နာရီအချိန်တွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ကုန်သည်များနှင့်စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း(MRCCI) အစည်းအဝေးခန်းမ၌ MRCCI ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်မင်းပါ ချေးငွေထောက်ပံ့ရေးကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်(၁၀)ဦး၊ KBZဘဏ်မှ Deputy Managing Director ဦးတင်ထွန်းပါ KBZ ၀န်ထမ်း(၈)ဦးတို့နှင့်တွေ့ဆုံ၍ MRCCI…
ဂျပန်-မြန်မာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး
အရည်အသွေးပြည့်မီသော သစ်သီးဝလံနှင့်ပဲ၊ နှမ်း စသည့် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ နိုင်ငံခြားသို့ တင်ပို့ နိုင်ရေး
၂၀၁၇ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၉ ရက် MRCCI အသင်း ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းဌေး၊ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး ဦးတင်လတ်ပါ အသင်းဝင်များ၊ ညီနောင် အသင်းဝင်များ၊ လုပ်ငန်းရှင်များ ပေါင်း(၇)ဦးနှင့် Embassy…
စင်္ကာပူ အဖွဲ့မှ ဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများ ပြပွဲအတွက် လာရောက်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး
၂၀၁၇ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ(၂၃)ရက်တွင် မန္တလေးမြို့တော်ခန်းမ၌ ကျင်းပမည့်
၂၀၁၆ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၉ ရက် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ကုန်သည်များနှင့်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း(MRCCI) မှ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဒေါက်တာမောင်မောင်၊ တွဲဖက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး(၅) ဦးသက်ထွန်းလင်း မန်နေဂျာ ဦးထင်အောင်နှင့် အဖွဲ့သည် ၉.၁၁.၂၀၁၆ ရက် နေ့လည်…
Dialogue on Food Value Chain in Myanmar အခမ်းအနား ကျင်းပ MRCCI နှင့် Aesan-Japan Centre တို့ပူးပေါင်း၍
အိန္ဒိယ ကောင်စစ်ဝန်ချုပ် Dr.နန္ဒာကူးမားအား နှုတ်ခွန်းဆက် အမှတ်တရ လက်ဆောင်ပစ္စည်း ပေးအပ် တာဝန်ပြီးဆုံး၍ အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ထွက်ခွါတော့မည့် အိန္ဒိယကောင်စစ်ဝန်ချုပ်
လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးလျှင် ကျပ်သိန်း(၁၀၀)စီထောက်ပံ့ငွေပေးအပ်မည့် အစီအစဉ် ဆွေးနွေးပွဲ MRCCI ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်မင်းပါ ချေးငွေထောက်ပံ့ရေးကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်(၁၀)ဦး၊ KBZဘဏ်မှ
ဂျပန်-မြန်မာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး အရည်အသွေးပြည့်မီသော သစ်သီးဝလံနှင့်ပဲ၊ နှမ်း စသည့် ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ နိုင်ငံခြားသို့ တင်ပို့ နိုင်ရေး
စင်္ကာပူ အဖွဲ့မှ ဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများ ပြပွဲအတွက် လာရောက်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ(၂၃)ရက်တွင် မန္တလေးမြို့တော်ခန်းမ၌ ကျင်းပမည့်
You are here: Home Uncategorised ရတနာပုံတက္ကသိုလ်'' Job Fair''အခမ်းအနားတက်ရောက်ခြင်း
There wasaproblem loading image 2Q==.
There wasaproblem loading image 9k=.
ရတနာပုံတက္ကသိုလ် တွင်ကျင်းပပြုလုပ်သော “ Job Fair “ အခမ်းအနားတက်ရောက်ခြင်း
ရတနာပုံတက္ကသိုလ်တွင်(30-1-2019 ) ရက်နေ့နံနက်(83း0)အချိန်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ‘’Job Fair ‘’ အလုပ်အကိုင်ပြပွဲအာင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ရေးအတွက် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ကုန်သည်များနှင့်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းအနေဖြင့် Gold Sponsor ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။
MRCCI အသင်းကြီးအနေဖြင့် မိမိဒေသအတွင်းရှိ အနာဂတ်လူငယ်များ အောင်မြင်ရေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာစေရေးအတွက် ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါပြပွဲတွင် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဦးဥက္ကာကျော်၊ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူးဦးသိန်းမြင့် ၊ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်များဖြစ်ကြသော ဒေါ်သီတာရွှေ၊ဦးသန့်ဇင်ဦး၊ ဒေါ်မေမမိုးဦး၊ အလုပ်အမှုဆောင်ဦးဇော်ဇော်တို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
mRCCI ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ၏ ၂၀၁၉ အတာသင်္ကြန်...
Written on 10/04/2019, 15:42
💦 မြန်မာ့ရိုးရာ နှစ်သစ်ကူးအခါသမယမှာ မိတ်ဆွေအပေါင်း စိတ်၏ ချမ်းသာခြင်း၊ ကိုယ်၏ ကျန်းမာခြင်းနှင့် ပြည့်စုံ၍ စီးပွားလာဘ်လာဘများ၊...
Written on 30/01/2019, 16:20
ရတနာပုံတက္ကသိုလ် တွင်ကျင်းပပြုလုပ်သော “ Job Fair “ အခမ်းအနားတက်ရောက်ခြင်း ရတနာပုံတက္ကသိုလ်တွင်(30-1-2019 ) ရက်နေ့နံနက်(83း0)အချိန်တွင်...
'CONSENSUS MYANAMR 2019"MANDALYA ပွဲကျင်းပခြင်း
Written on 22/01/2019, 11:18
“Consensus Myanmar 2019” Seminar ပွဲအား MRCCI , NAGANI Community, MCIA, MCPA တို့ပူးပေါင်း၍ (20-1-2019) ရက်နေ့ နံနက်(83း0) မှ (5း00)ထိ...
Written on 08/01/2019, 14:07
(7-1-2019)ရက်နေ့ (3:00)နာရီ Mandalay Convention Center တွင် ကျင်းပသော မန္တလေးမြို့တော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်...
Written on 29/12/2018, 11:10
၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၂၉)ရက်နေ့၊ နံနက်(၁၀း၀၀)အချိန်တွင် MRCCI...
MRCCI အသင်းကြီးမှ အခါအခွင့် အလိုက် ထုတ်ပြန်ခဲ့သော ကြော်ငြာချက်များကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
2014-2015 ခုနှစ်အတွက် နှစ်ပတ်လည် အစီရင်ခံစာနှင့် နှစ်ချုပ်ငွေစာရင်း ရှင်းတမ်းကို ရယူနိုင်ပါသည်။
MRCCI သို့ အသင်းဝင်ရန် အတွက် အောက်ပါအချက်များ လိုအပ်ပါသည်။ ..............
mRCCI ညီအစ်ကိုမောင်နှမများ၏ ၂၀၁၉ အတာသင်္ကြန် နှစ်သစ်ဆုတောင်း
အတူတူနွှဲပျော်၊ MRCCI 2019 မြန်မာ့အတာ သင်္ကြန်ပွဲတော်
Appointment with malaysia ambassador
Mandalay Int'l Trade fair and business forum 2019 အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ရေးအတွက် အဖက်ဖက်မှ ၀ိုင်းဝန်းကူညီပေးခဲ့ကြသော မိတ်ဆွေများအား အထူးကျေးဇူးတင်လွှာ
“MRCCI နှင့် IHK-Reutlingen တို့အကြား (၂၀၁၈-၂၀၂၁) သက်တမ်းအတွက် Implementation Agreement လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း”
MRCCIနှင့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ တက်ဟုန်းပြည်နယ်ခွဲကုန်သည်ကြီးများအသင်း (မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စားလှယ်ရုံး)တို့ ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်သော “တရုတ်အစားအစာ စားဖိုမှူးမွမ်းမံသင်တန်း” သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ
MDYITFBF 2019 - working committee's meeting
စားသုံးသူ ကာကွယ်ပေးရေး အကြောင်း သိကောင်းစရာများ
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအေးမြင့်နှင့် အဖွဲ့အား တွေ့ဆုံ
Smart Idea for you အကြိုစာနယ်ဇင်း ရှင်းလင်းပွဲ
Idea move development Co.,ltd, နှင့်တွေ့ဆုံခြင်း
အလုပ်ခန့်ထားခြင်း ဆိုင်ရာ ဥပဒေ(မူကြမ်း) ဆွေးနွေးပွဲ
၂၀၁၅ ဧပြီလအတွက် ပုံမှန် လပါတ် ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေး ကျင်းပ
Invitation to Australian Education Exhibition at Sedona Hotel Mandalay
MRCCI ကို ချစ်သော မန်းမြို့သူ၊ မြို့သားများခင်ဗျား, ၂၀၁၉ ခုနှစ် မြန်မာ့ရိုးရာ... Read More...
ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နံနက် ၉:၃၀ အချိန်တွင် Mercure Mandalay Hill Resort ၌ မလေးရှားသံအမတ် H.E Mr Zahairi Bin Baharim... Read More...
မြန်မာနိုင်ငံ ဆန်စပါးအသင်းချုပ်၏ အထွေထွေညီလာခံနှင့် နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအစည်းအဝေး - ၂၀၁၉
မြန်မာနိုင်ငံ ဆန်စပါးအသင်းချုပ်၏ ဦးဆောင်စီစဉ်မှုဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်သော “ဆန်စပါးနှင့်... Read More...
ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းရုံး(SSSCCI)၏ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ MRCCI မှ ပါဝင်တက်ရောက်
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း (SSSCCI)... Read More...
Business Agenda ရေးဆွဲပြုစုခြင်းအခမ်းအနားဖိတ်ကြားခြင်း။
Business Agenda ရေးဆွဲပြုစုခြင်းအခမ်းအနား Business Agenda ရေးဆွဲပြုစုခြင်းအခမ်းအနား အား MRCCI အသင်းနှင့် ILO မှ... Read More...
Myanmar-India business summit & trade fair by SDCCI
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နီဝါရီလ (၁၁) ရက်နေ့တွင် စစ်ကိုင်းခရိုင်ကုန်သည်ကြီးများအသင်း SDCCI မှ... Read More...
၇၂ ကြိမ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့ အခမ်းအနားသို့ MRCCI မှ ကိုယ်စားလှယ်များ တက်ရောက်
မန္တလာသီရိအားကစားကွင်းတွင် ကျင်းပသော (၇၂) နှစ်မြောက် ပြည်ထောင်စုနေ့အခမ်းအနားသို့... Read More...
စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာ၊ ကုန်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန... Read More...
၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်န၀ါရီလ ၂၆ ရက်နေ့ (၁၁း၃၀)အချိန်တွင် မန္တလေးမြို့... Read More...
၅.၉.၂၀၁၇ ရက်နေ့ (၀၉း၀၀) am အချိန် Mandalay Hill Resort Hotel တွင် Bangkok Post Public Company Limited နှင့် Asset Pro Mangement Co,..Ltd တို့... Read More...
Information updodate သိလိုပါက email ပေးခဲ့ပါ။
Copyright © 2015. All Rights Reserved by MRCCI.
Designed by Central Computer.